လူမျိုးတွေအားလုံးပေါင်းပြီး… မြန်မာ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်ရပ် မွေးထုတ်ဖို့ ခြေပုန်းခုတ်ခဲ့တာများ… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဗိုလ်ချုပ်ရွေးတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ပေးချင်တဲ့ သာတူညီမျှအခွင့်ရေး
Daw Aung San Suu Kyi Meet Tun Abdullah Ahmad Badawi »
ကြိုမြင်ခဲ့သူတွေကလဲ “အမျိုးပျောက်လဲ ဘာဖြစ်လဲ..။ ငါတို့ကိုယ်နှိုက်က စုပေါင်းစပ်ပေါင်းဖြစ်လာတာပဲ၊ ဒီအမျိုး နာမည်ပျောက်ရင် နောက်နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ လူမျိုးတော့ ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့..။”လို့ သဘောထားကြတယ်ထင်တယ်.။ တကယ်ပါဗျာ..။ ကချင်ကအစ၊ ဗမာအလယ်၊ ရှမ်းအဆုံး လူမျိုးတွေအားလုံးပေါင်းပြီး. မြန်မာ ဆိုတဲ့ လူမျိုးတစ်ရပ် မွေးထုတ်ဖို့ ခြေပုန်းခုတ်ခဲ့တာများ. ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ဖင်ခုထိုင်တဲ့အထိပဲ..။
“သောက်ကြီးသောက်ကျယ်နဲ့ ဘာတွေလာပွားနေတာလဲ..၊ မင်းက ဘာကောင်မို့လို့လဲ..။”လို့များ ပြန်မေးချင်သလား.။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး.။ ကျနော် သာမန်အရပ်သား ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ.။ ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)ကျောင်းဆင်းပါ…။ ခေတ်ပညာတတ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်ခံထိုက်သူ တစ်ယောက်ပါ.။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ပြောတာတွေ ရေးတာတွေဟာ ပေါက်လွတ်ပဲစား ပညာတတ်မဆန်လိုက်တာလို့ သမုတ်ချင်ရင်တော့လဲ သဘောပါ..။ ကျနော့်ကို ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလနဲ့ စနစ်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ ဘာပဲပြောပြော ခုစာကို သာမန်အရပ်သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ ရေးမှာပါ..။ လူပြိန်းတစ်ယောက်လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့..။
“နောက်ဆုံတော့လဲ ဒီဘူတာပဲဆိုက်တယ်”လို့ အပြောမခံရအောင် ဒီဘူတာကနေ စလိုက်ပါတယ်.။ ဟုတ်ကဲ့..။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆိုအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲ ဆိုတာကြီးပါ..။ ဘာလဲဗျ.. မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ..။ မြန်မာဆိုတဲ့ အသုံးဟာ ဗမာတိုင်းရင်းသာတစ်နွယ်တည်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးအားလုံးအတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ၁၉၄၈ ကတည်းက အတည်ပြု သုံးနှုန်းခဲ့ကြတာပဲ..။ အင်္ဂလိပ်လို Burma..၊ ဗမာလိုတော့ မြန်မာဆိုတာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ နာမည်ရယ်. .။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား.။
“အဲဒီလို မှတ်လို့ မရဘူးလေကွာ..။ မြန်မာဆိုတာ နိုင်ငံအနေနဲ့သာ အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာလေ.။ ယဉ်ကျေးမှု..၊ စာပေ.၊ စကား စတာတွေကတော့ ဗမာတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ… မင်း ဒါလေးတောင်မသိဘူးလား… ငတုံး.။”
ဆိုတော့ကာ……။ ၁၉၄၈ ကတည်းက အားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒီစကားလုံး ၁၉၉၂ ကစပြီး ကိုယ်ရောင်ဖျောက် ရုပ်ဖျက် စင်ပေါ်တက်လာပုံက ညက်ညက်ညောင်းညောင်းလေးရယ်..။ အနှီ “မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအဆိုအကအရေးအတီးပြိုင်ပွဲ” ဆိုတာနဲ့ပါ..။ ဆိုလိုက်၊ ကလိုက်နဲ့ ရိုးရာအမွေထိန်းသိမ်းကြပုံများ ကျနော့်မှာ မုဒိသာပွားလို့..။ မြန်မာဆိုမှတော့ အားလုံးပါမယ် မျှော်လင့်တာကိုး..။ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်..။ ဗမာသီချင်းကြီးတွေကို ကချင်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး တက်ဆိုတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူ ကချင်မလေးသာ လင်ရပြီး ကပြားလေးတွေ မွေးသွားတယ်.။ တောင်ပေါ်သားရှမ်းကလေးသာ မြေပြန့်မှာ အိမ်ထောင်ကျကျန်ခဲ့တယ်…။ (ဥပမာပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်.။ တစ်လွဲဆံပင်ကောင်းမနေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်..။) ဗမာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်း နဲ့တင် မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကြီး ၀ါးလုံးခေါင်းထဲလသာနေပါရောလားဗျို့….။ အော် ကျနော်လဲ ဖာသိဖာသာပေါ့ဗျာ..။ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေမြင့်တင်ပေးဖို့ အချိန်မရသေးလို့ပါ..။ ကျန်တာတွေ နောက်တဖြည်းဖြည်းလာမှာပါပေါ့..။ ဖြည့်စွက်တွေးပေးနေပါသေးတယ်..။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ… လား .. လား.. ညောင်မြစ်တူးရင်း ဖွတ်ဥတွေ ပေါ်လာ ပါတော့တယ်..။။
လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးရွှေမန်းမှာ ကရင်သွေးပါတယ် ဆိုပြီး ပြောတာ သတိထားလိုက်မိပါတယ်..။ ပြောတဲ့သူက မြန်မာပြည်ကြီးမှာ တိုင်းရင်းသားတိုင်း အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှရှိကြောင်း လူမျိုးရေး ခွဲခြားခြင်း မရှိကြောင်း ထောက်ပြချင်တာပါ…။ ရှေ့ဖုံး နောက်ပေါ်.. သူပြောမှပဲ လူမျိုးကွဲတွေညားပြီး ကပြားမွေးရာကနေ လူမျိုးပျောက်တာမဲ့ကိစ္စအထိ ပေါ်တော်မူလာပါရော…။ (တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ ပြောလိုက်ပါဦးမယ်..။ “စောင့်လေမျိုးနွယ်” ဆိုတာ သားသမီးကျင့်ဝတ်မှာ အတိအလင်းပါပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တတ်စွမ်းသူ အင်အားရှိသူတွေကတော့ လက်နက်အဖြစ်ကို သုံးနေသလားပဲ..။ ကိုယ်ကလွှမ်းမိုးမဲ့၊ ကိုယ့်လူမျိုးဖြစ်လာမဲ့နေရာမှာတော့ လူမျိုးခြားလဲ ရဲရဲသာယူကြ.။ ကပြားလေးတွေ မွေးကြ..။ ကိုယ်က ပျောက်သွားမဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ ကြပ်ကြပ်ကာကွယ်ကြ..။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက်အနေနဲ့ အသုံးပြုပြီး ချောက်ချကြ.. အဲသလိုများ ညွှန်ကြားထားလေသလားပဲ..။)
ဘာလူမျိုးလဲ မေးရင် မြန်မာပါလို့ ဖြေတဲ့ဗမာတွေ ထင်ရှားငုတ်တုတ် ရှိနေကြပါသဗျ…။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေထဲမှာကို ပါပါတယ်.။ ဒီလို ရောရောထွေးထွေး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်အောင်လဲ တမင်ကို မျက်ခြေဖြတ် လှည့်စားထားကြတာကိုး..။ ဗမာနဲ့ မြန်မာ မကွဲမပြားလုပ်ထားကြတယ်.။ (ဗမာတွေကို မြန်မာလို့လဲခေါ်တာ အရင်တစ်ခေတ်ကတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်.။ ဒါပေမဲ့ ခုတော့ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပြီးပြီလေ..။ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်အောင် လုပ်ရမှာပေါ့.။) ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်းကိုယ်အာပေးခဲ့တာပဲ..။ ကျနော်ဆိုရှေ့ဆုံးက..။ “မြန်မာ..မြန်မာ”လို့လဲ ကုန်းအော်ခဲ့ဖူးတယ်.။ ဒါပေမဲ့ အတူအော်နေတဲ့လူတစ်ချို့ကို မေးကြည့်တော့ လူမျိုးနဲ့ နိုင်ငံ ဘာကိုအစွဲပြုအားပေးနေမှန်း သေချာ မပြောတတ်..။ ဥပမာ အင်္ဂလန်အသင်းကို သူ့ပရိသတ်အားပေးနေသလိုလား.။ အိုလံပစ်ပွဲဝင်မဲ့ ဂရိန်ဗြိတိန်အသင်းကို အားပေးတာလား မကွဲတဲ့ပုံမျိုး..။ သြော် လူမျိုးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ Identity တွေ ရောထွေး သမမွေခံနေရပါပြီကော..။ ဗမာသီချင်းကြီးတွေ တခြားတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံဝတ်ပြီး တက်ဆိုတာကို မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတဲ့..။ ၁၉၉၂ ကနေခုထိဆို နှစ် ၂၀ ရှိပြီ..။ အဲဒီကာလကမွေးတဲ့ ကလေးတွေ အခု မဲပေးလို့ရနေပြီ..။ ဒါက သမိုင်းကို ပြင်ရေးဖို့ ကြိုးစားတာ မဟုတ်လို့.. ဘာလဲ..။ မြန်မာဇာတ်သွင်းတာ မဟုတ်လို့ ဘာလဲ..။
အဲသလို.. အဲသလို ပေါ့ဗျာ..။ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ပါပါရက်နဲ့.. “ကဲ မင်းက ခွေးကတက်မှာ ထိုင်.။ မင်းက အိမ်ရှေ့ကပြင်မှာ နေရာယူ၊ မင်းက နောက်ဖေးပေါက်မှာအိပ်” ဆိုပြီး နေရာပေးခံရ..၊ မြန်မာဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ဝေးသထက်ဝေးလာ.၊ ကိုယ့်ပြည်ထောင်စုမှာမှကိုယ် ကိုလိုနီလက်သစ်အောက် ကျွန်သဘောက်ဘ၀ရောက်ရတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်ချင်စိတ်ပေါ်လာကြတာ မဆန်းပါဘူး.။ အစ်ကိုကြီး အဖအရာ ထားပါရက်မှ စောက်သုံးမကျ.. လက်ဝါးကြီးအုပ်လာရင်တော့ နရင်းအုပ်ထားဖို့သာကောင်းတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိသမျှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးနီးပါးမှာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေ ရှိနေတာက အစ်ကိုကြီးအပေါ် ညီငယ်တွေ ဘယ်လောက် ယုံကြည်အားထားလဲ.၊ ဘယ်လောက်ကျေနပ်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်..။ တစ်နည်းပြောရရင် အစ်ကိုကြီးက ညီငယ်တွေပေါ် ဘယ်လောက်တရားသလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်..။ လူမျိုးတစ်စု သူပုန်ထတယ်ဆို ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်. လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ ပြည်ထောင်စုက ခွဲထွက်ချင်လို့…။ လူမျိုးနှစ်မျိုး..၊ အင်း ဖြစ်နိုင်သေးတယ်..။ အဲ.ရှိသမျှ လူမျိုးအားလုံး တော်လှန်လာကြတာကိုမှ “အစ်ကိုကြီးက တရားတုန်းပါပဲ..။ ညီငယ်တွေကသာ ရင့်ကျက်မှုမရှိဘဲ စေတနာကို နားမလည်ကြတာ” လို့ဆက်ပြောရင်တော့ ရူးနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ အလျှော့ပေါ့ဆုံး ပြောရရင်တောင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြည်ထောင်စုထဲမှာ နေပျော်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်တာ..၊ ခွဲထွက်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာအောင် လုပ်တာဟာ အစ်ကိုကြီးတို့ ညံ့တာပါခင်ဗျား…။
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Articles, Burma, Burmese language, Htein Lin, Kokang, Languages, Southeast Asia
This entry was posted on February 17, 2012 at 9:56 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.